माधव नेपाल र झलनाथहरु नभएको भए प्रतिगमनलाई प’रास्त गर्न सकिँदैन थियो :- हिमलाल पुरी ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १३, २०७८ आइतबार 196
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन् । तर, सरकारले गरेको कामको आधारमा समर्थन वा वि’रोध भने गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले थप भने, ‘सरकारले गल्ती गर्छ भने विरोध गर्छौं । सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था छैन । सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ । सरकारात्मक काम गर्नको लागि सरकारलाई बाहिरबाट सहयोग गर्नुपर्छ । नकारात्मक काम गरे वि’रोध गर्छौं ।’
Prevकाबुल विमानस्थलमा ६० जना हैन,६० परिवार मा’रिए’ !
Nextआज भदौ १४ गते । सोमबार , कस्तो रहला दिन ? हेर्नु-होस तापाइको आजको राशिफल !